Zvirongwa zvekushandura mafoto kuita mavhidhiyo - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 13/06/2022 22:31 | Zvirongwa
Kana iwe uchida kushandura mafoto ako kuita mavhidhiyo kuti atsigire mapurojekiti ako edhijitari, uri panzvimbo chaipo. Isu tichanongedza mamwe eakanakisa emahara uye akabhadharwa zvirongwa. Iwe unozodzidza akanakisa maturusi ekupa mafoto ako 360-degree kutendeuka, uchiwedzera hunyanzvi uye kunakidzwa.
Ose ari maviri mavhidhiyo nemifananidzo ane animated zvinhu zviviri zvakakosha, nekuti munguva pfupi vanotangisa meseji zvakananga kune vateereri vedu. Maitiro ekushandura mafoto kuita mavhidhiyo, Zvinogona kunetsa kune vazhinji vako kana ukasashandisa chaiwo maturusi ayo.
Zvemukati zvinoonekwa zvese muhupenyu hwedu pachedu, nekushandiswa kwemasocial network, uye munzvimbo yebasa, zvakakosha kana zvichizokanganisa vateereri vakasiyana vanogona kutiona. Ndisu sevagadziri, avo Tinofanira kukanganisa vateereri ava tichishandisa zvinhu zvinoita kuti tive vakasiyana nevamwe.
1 Zvishandiso zvakanakisa zvekushandura mafoto kuita mavhidhiyo
1.1 Adobe Spark Vhidhiyo kana Adobe Express
Zvishandiso zvakanakisa zvekushandura mafoto kuita mavhidhiyo
Muchikamu chino, iwe unowana a diki sarudzo yei kwatiri mamwe eakanakisa mapurogiramu ekushandura mafoto kuvhidhiyo pamusika. Iwo haasi akanakisa nekuda kwedhizaini yavo yekugadzira, asiwo nekuda kweakawanda mabasa uye sarudzo dzekushanda nekuwana mhedzisiro yemhando yepamusoro.
Adobe Spark Vhidhiyo kana Adobe Express
Sezvatinoziva tese, iyo Adobe package inozivikanwa pakati penyanzvi uye vanoda nyika yegraphic art, iyo iwe yaunogona kugadzira marogo, mapeji ewebhu, edhizaini, nezvimwe.
Chimwe chezvishandiso chinogona kuwanikwa ndeye Adobe Spark Vhidhiyo, a chishandiso chiri nyore kushandisa chaunogona kukurumidza kushandura mafoto ako kuita vhidhiyo. Zvakare, zvinokutendera kuti ugadzirise mavhidhiyo nekuwedzera mameseji, kugadzirisa nguva yekutamba, kusarudza chimiro chetsika, nezvimwe.
Unofanira chete rodha mufananidzo wako uye wouwedzera kune siraidhi, ronga zvese zvirimo, zvese multimedia uye zvinyorwa. Chinhu chinotevera chichava chekusarudza dingindira remasiraidhi uye rigadzirise kuti rienderane nemaitiro ako. Gadzirisa nguva, gadzirisa vhidhiyo uye wapedza.
chimwe chishandiso, foto vhidhiyo mugadziri anogona kubatsira vazhinji vako kuunganidza ako ese mafoto enguva dzaunofarira, mune imwe. Iyi purogiramu inonyatsozivikanwa pakati pevashandisi, mairi, inobvumirwa kuwedzera mimhanzi, mifananidzo yakawanda panguva imwe chete, mamwe mavhidhiyo, nezvimwe.
Iwe unofanirwa kuvhura chirongwa, uye kurodha mafoto aunoda. Tevere, iwe uchasarudza template kana masiraidhi kuti uwedzere iyi mifananidzo. Ronga zvinhu zvakasiyana kune zvaunofarira, kugadzirisa, chirimwa, shandura saizi, nezvimwe.. Kamwe izvi, wedzera zvinyorwa kana iwe uchifunga kuti zvakakosha uye dhawunirodha.
Yakanyanya kufarirwa, kune avo vashandisi vari kutsvaga kushandura mifananidzo yavo kuita mavhidhiyo, uye vanogonawo kuzviita nemagwaro. Ichi chishandiso chepamhepo chinokutendera kuti utore mifananidzo zviri nyore uye uishandure kuita vhidhiyo nechinangwa chekukanganisa veruzhinji. Unogona kuwedzera zvinyorwa, matemplate echinyakare, mhedzisiro, shanduko, InVideo chishandiso chakazara kwazvo.
Unongo pinda, sarudza kubva kune anopfuura zviuru zvishanu matemplate aripo, isa iyo mifananidzo iyo yaunoda kushandura, wedzera zvinhu zvakasiyana uye shanduko uye, pakupedzisira, dhawunirodha faira mune yaunoda kugadzirisa.
Kana iwe uchida kushandura mafoto kuvhidhiyo zviri nyore, ichi chishandiso chepamhepo uye mabasa ayo akasiyana achakubatsira. Iine chimiro chakareruka, Animoto pasina kupokana chirongwa chisingafanirwe kushaikwa kune vakawanda nyanzvi muchikamu chekugadzira uye munyika yemultimedia.. Animoto ine akasiyana siyana ekuchinja uye mameseji maturusi ekutora kusikwa kwako kune rinotevera nhanho.
Isa iyo mifananidzo uye sarudza iyo template inonyatsoenderana nezvido zvako. Wobva wagadzirisa uye ronga mafoto aya, chekerera, fambisa, wedzera mafirita, nezvimwe. Ita kuti imwe neimwe yemifananidzo ive nemhando yakasiyana. Batanidza mavara, kana iwe uchifunga kuti zvakakosha, uye sarudza maitiro anoita kuti kuumbwa kwako kubude pachena.
Vhidhiyo yekugadzirisa chirongwa chine akasiyana ekutanga ekugadzirisa mabasa akadai sekucheka, kupatsanura, kuwedzera mimhanzi, kuwiriranisa, nezvimwe. Ichi chishandiso, cherechedza kuti chinongova nemazuva matanhatu emahara muyedzo. Pakati pevashandisi vemhando iyi yezvishandiso, VhidhiyoPad yakawana mukurumbira munguva pfupi yapfuura nekuda kwekubata kwayo nyore uye dzakasiyana siyana sarudzo.
Inokupa iwe mukana wekushanda neanopfuura makumi mashanu akasiyana ekuchinja uye mafomati, iyo iwe yaunogona kurodha zvisikwa zvako kumapuratifomu seYouTube. Zvichienderana nehuwandu uye huremu hwemafaira auri kushanda nawo, anogona kudzikira pane dzimwe nguva.
Zvakare Nekudzvanya zvishoma, iwe unozogona kugadzira vhidhiyo yemifananidzo online nenzira iri nyore. Kana ukasarudza chishandiso ichi, unozokwanisa kugadzira mavhidhiyo zviri nyore, kungoisa mafoto ako, kuagadzirisa, kuaronga uye nekuaita mhenyu.
Matanho aunofanirwa kutevedzera kuti uwane mhedzisiro yehunyanzvi ndeaya anotevera; tinya pane iyo sarudzo yekugadzira vhidhiyo nyowani uye sarudza marongero anoenderana nezvido zvako. Enda uchiwedzera zviitiko uye tanga kurodha mifananidzo yako. Shandura mafaira akati uye zvigadziriso zviripo. Sarudza iyo mufananidzo maitiro sarudzo uye tanga kuunza mafoto ako kuhupenyu.
Sezvataona nemamwe maturusi, Clideo imwe yaunogona kushandura mafoto ako kuita mavhidhiyo. Kana iwe ukabata chirongwa ichi, unogona kuwedzera mafaira akasiyana kamwechete, kwete mifananidzo chete, asiwo maGIF nemavhidhiyo. Iyo ipuratifomu yemahara yepamhepo, umo pasina imwe yekuwedzera application inodiwa.
Isa mifananidzo yako yaunofarira, gadzirisa mafaera aya munhevedzano, gadzirisa sezvaunoda, unogona kuadyara, woaswededza, woagadzirisa, nezvimwe. Wedzera zvaunofarira zvimedu zvekuteerera, zvigadzirise uye Kana mhedzisiro yacho ikakupwisa, usazeze kwechipiri uye enderera kudhawunirodha.
Zviri nyore kwazvo, maitiro ekushandura mafoto kuita mavhidhiyo ane izvi zvirongwa zvatataura. Iwe unongofanirwa kujeka nemifananidzo yauchashanda nayo uye kugadzira vhidhiyo inonakidza. Rangarira kuti zvinodikanwa kuti uzive kuti ndechipi chishandiso chinonyatsoenderana nezvido zvako uye ndechipi chaunonzwa wakasununguka nacho paunenge uchishanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: HupenyuBytes » Zvirongwa » Zvirongwa zvekushandura mafoto kuita mavhidhiyo